Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » United Airlines: Nweta jab COVID-19 ma ọ bụ fuo
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
United Airlines: Nweta jab ma ọ bụ tufuo
Ndị ọrụ United Airline jụrụ ọgwụ mgbochi COVID-19 agaghị ekwe ka ha banye ebe ọrụ mgbe Ọktọba 2 gasịrị.
United Airlines kwupụtara iwu ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka ndị ọrụ.
A ga-achụpụ ndị United Airlines jụrụ COVID-19 jab.
A ga -etinye ndị ọrụ ụgbọ elu nwere mmụba nke ọgwụ mgbochi na ezumike ebighi ebi.
N'ime ndetu ụlọ ọrụ ezigara ụnyaahụ, United Airlines ekwupụtala na ndị ọrụ ụgbọ elu niile na -anata nnwere onwe okpukpe, ahụike ma ọ bụ nke onwe site na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa coronavirus ga -ezigara na ezumike akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ahụike ruo mgbe ebighi ebi, n'agbanyeghị ihe kpatara ma ọ bụ ọkwa ha.
“Ozugbo oria ojoo ahụ kwụsịrị, ọ ga-anabata gị ka gị na ndị otu nọ n'ọkwa dị ike,” ka ndị ọkwọ ụgbọ elu, ndị na-eje ozi ụgbọ elu na ndị ọrụ ndị ahịa-kọwara dị ka ndị ọrụ na "ọrụ ndị ahịa na-eche ihu"-ka edere n'akwụkwọ ozi.
United Airlines ndị ọrụ na -anaghị eso ndị njem emekọrịta ihe, dị ka ndị na -ezipụ ihe na ndị ọrụ ụgbọ ala, ndị akwadoro maka nnwere onwe ka a ga -anwale kwa izu wee yikwasị ihe nkpuchi mgbe niile mgbe ha na -arụ ọrụ, gụnyere mgbe ọ nọ n'èzí.
Onye ọ bụla enyere ikike ka a gụpụ ọgwụ, a ga -etinye ya na ezumike ahụike nwa oge. Ndị ajụrụ arịrịọ maka ka ahapụ ha ga -ewere ogbugba nke mbụ n'ọnwa Septemba 27 wee gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa n'ime izu ise ma ọ bụ tufuo ọrụ ha kpam kpam, dị ka ndetu nke VP nke ndị ọrụ mmadụ Kirk Limacher zipụrụ.
Ndị nlekọta United Airlines akọwapụtabeghị etu ụgbọelu ga -adị njikere inye arịrịọ maka nnwere onwe, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ ekwubeghị ole ọ nwetara.
United bụ ụlọ ọrụ ụgbọ elu mbụ nke US nke nyere iwu ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na ndị ọrụ 67,000 gbakwunyere, na mbido Ọgọstụ. Ndị ụgbọ elu ndị ọzọ akwagala ịkwụsị nchebe ịkwụ ụgwọ maka ndị ọrụ na -agbabeghị ọgwụ na -anwale ihe ọma maka nje a. Delta Air Lines etinyela ego $ 200 maka ụgwọ ahụike ndị ọrụ na -agbabeghị ọgwụ.
Ụlọ ọrụ US na ụlọ ọrụ gọọmentị ka iwu kwadoro ka ewepụta ihe mgbochi n'ihe metụtara okpukpe ma ọ bụ ọgwụ, n'agbanyeghị na ha agaghị enye ha. Ọchịchị Biden agbaala iwu maka ịgba ọgwụ mgbochi ọha na nkeonwe ka ọnụ ọgụgụ COVID-19 na US arịala elu n'oge ọkọchị.
Ndị ụgbọ elu, na ndị ọkwọ ụgbọ elu na ndị na -ahụ maka ụgbọ elu ejirila ịnụ ọkụ n'obi nabata mgbatị ikike nkpuchi gọọmentị, nke etinyere na mbụ na February wee zuo otu narị ụbọchị.
United bụ ụgbọ elu US nke anọ kachasị ukwuu site na ọnụ ọgụgụ ndị njem na-ebu, mana nwere ụgbọ mmiri nke abụọ kachasị ukwuu ma na-eje ozi ebe kacha aga, dị ka ọnụ ọgụgụ ọrịa na-efe efe tupu.